रिहारको ढुंगा हरायो | Epradesh Today
Homeमुख्य खबररिहारको ढुंगा हरायो
देउखुरी, १९ असार । दाङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बगारबाबा मन्दिरमा रहेको ऐतिहासिक ढुंगा हराएको छ । उक्त ढुंगा कुन दिन हरायो ? भन्ने बारे न मन्दिरका पुजारीलाई थाहा छ न धार्मिक विकास समितिलाई नै । ऐतिहासिक महत्व बोकेको उक्त ढुंगा एकाएक हराउँदा स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् ।
लमही नगरपालिका वडा नं. ९ अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ रहेको बगार बाबा मन्दिरमा बर्षौदेखि राखेको उक्त ढुंगा हराउँदा धार्मिक विकास समितिको लापरबाही देखिएको छ ।
हरेक बर्ष माघको १ गते ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । उसो त रिहार धामले थुप्रै विशेषता बोकेको किम्बदन्ती रहेको त्यहाँका स्थानीयको भनाई छ । पुसको अन्तिम सातादेखि रिहार क्षेत्रमा नेपालका धेरैजसो जिल्ला बाट घुम्न र दर्शन गर्न आउने गर्दछन् भने हजाराँै भारतीय तिर्थालु भक्तजन पनि आउने गर्दछन् ।
रिहारको धाममा तप्त कुण्ड, जहाँ पौराणिक कालमा रुमालमा चामल बनेर तालमा दुबाउँदा भात जस्तै पाकेको किम्बदन्ती छ । त्यस्तै मामा भाञ्जाको मन्दिरको पनि आफ्नै विशेषता रहेको छ । रिहारको गौ चरणमा गाई चराउन गएको समय मामाले भाञ्जालाई अपशब्द बोलेकोले दुबै जना सोहि ठाउँमा बिलिन भएको पौराणिक कथन छ । दर्शन गर्न आउने भारतीय तिर्थालुहरुले भारत फर्किदा प्रसादका रुपमा माटो (घ्यू खानी माटो) लगेर जाने गर्दछन् ।
त्यसै गरेर त्यस क्षेत्रमा रहेका अन्य मठ मन्दिरहरुको पनि आ–आफ्नै महत्व रहेको छ । रिहार धाममा आउने आगन्तुकले बगार बाबा मन्दिर, मामा भैने मन्दिर, तप्त कुण्डमा पूजापाठ गर्ने, नुहाउने गर्दछन् र फर्किदा बगार बाबा मन्दिरमा रहेको उक्त ढुंगा उचालेर काँधमा राख्दै मन्दिर परिक्रमा गर्ने गर्दछन् । प्रायजसो भारतीयहरु त्यहि ढुंगा उचाल्न र मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले आउने गरेको बताउँछन् ।
लमही नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष भेषबहादुर केसीले बाहिरको मान्छेले नभएर स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई दबाब र तनाब दिने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हुन सक्ने बताएका छन् । धार्मिक स्थलमा राखिएको ढुंगा के कति कारणले उठाइएको हो प्रशासन लगाएर खोजबीन गरिने र पत्ता लागे कानुन अनुसार कारबाही गरिने वडा अध्यक्ष केसीले बताए